/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Androsterone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H30O2
Ọbara arọ: 290.44
Androsterone raw ntụ ntụ bụ ezigbo prohormone nwere ọtụtụ uru maka ojiji ya. A na-esite na Androsterone raw powder na mbụ nke LG Sciences T-911 maka mmụba nke mbụ ọ na-enye, nakwa na a gụnyere ya na ọnụ ala dị na nsụgharị nke LG-Sciences Formadrol Extreme maka ọdịdị estrogen. Ugbu a, ma epiAndrosterone raw ntụ ntụ na Androsterone raw ntụ ntụ dị na propoomone Epi-1 Test.
AASraw na-enye 98% ọcha Androsterone raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ